November 2012 | IT Sharing Network
Mobile နှင့် ပတ်သက်သမျှ
Android အတွက် Root လုပ်နည်း၊ Ebookများ၊ Errorဖြေရှင်းနည်းများ၊ Game၊ App များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေပေးထားပါသည်။ Readmore...
Anti-Virus Software, Keys
Computer အတွက် Anti-Virus Softwares၊ Keys များ၊ Keymaker များနှင့် အသုံးပြုပုံများကို ရေးသားပေးထားပါသည်။ Readmore...
Mobile, Computer, Printer, Networking, Hacking, Blog, Website, Programing စသည်ဖြင့် နည်းပညာစာအုပ်များနှင့် ဗဟုသုတစာအုပ်များ၊ ဘာသာရေးစာအုပ်များကို လက်လှမ်းမှီသမျှ စုစည်းတင်ပေးထားပါသည်။ Readmore...
Computer အတွက် Error ဖြေရှင်းနည်းများ၊ WiFi Hacking နည်းလမ်းများ၊ Mobile ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းများ၊ Facebook,Gtalk,Browser,IDM အတွက်နည်းလမ်းများ၊ Network အတွက်နည်းလမ်းများကို ရေးသားမျှဝေထားပါသည်။ Readmore...
Windows ISO Downlaod Link များနှင့် အသုံးပြုပုံများ၊ Loder and Activator များ၊ ဖြေရှင်းနည်းများ၊ Windows တင်နည်း၊ အခြား Operating system များအကြောင်း၊ Windows BackUP and Restore ပြုလုပ်နည်းများကို စသည်ဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ Readmore...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် RAR ဖိုင်တွေမှာ ပေးထားတဲ့ password ကို Recover လုပ်ဖို့အတွက် Top Password RAR Password Recovery 1.80 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အခုနောက်ဆုံးထွက် version ပါ... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ပါဝင်ပြီး Mediafire နှင့် Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Ace Translator v9.7.3.728 (languages တွေကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလည်း ဖော်ပြပေးပြီး အသံထွက်ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် Ace Translator update ရလို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဘာအတွက်သုံးတာလည်းဆိုတော့ ( 65 languages ) ဘာသာရပ် 65 မျိုးကို အပြန်အလှန် ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ယုံသာမက (43 languages) 43 ဘာသာကို ( text-to-speech ) အသံထွက်မှန်မှန်ကန်ကန် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... ဥပမာ Chinese ဘာသာမှ English ဘာသာကို အပြန်အလှန် ဖော်ပြပေးနိုင်သည့်အပြင် အသံထွက် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... အဲ့လိုဖတ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် Ace Translator မှာအသုံးပြုနိုင်သော (43 languages ) 43 ဘာသာကို မိမိသိလိုတဲ့ စကားလုံး စကားပိုဒ်တွေကို အသံထွက်သိလိုတဲ့အခါ စကားပြော လေ့ကျင့်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး patch ဖိုင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါမယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Zippyshare, Sharebeast, Box, Dropbox လေးနေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Read more...0comment
Harddisk ကို Software မပါပဲ Partition အသစ်ပိုင်းမယ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကြီး အိုင်တီမုဆိုး လက်ရာလေးကို မူရင်းအတိုင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အိုင်တီမုဆိုး ကိုပယ်ပယ်နယ်နယ် click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Harddisk ရဲ့ Partition တွေကို အသစ်ထပ်ပြီး ပိုင်းချင်တဲ့အခါ Partition Magic လိုမျိုး Third Party ဆော့ဝဲမျိုးတွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ် .. တစ်ကယ်လို့ အဲဒီလို Partition အသစ်လည်း ထပ်ပိုင်းချင်တယ် .. ဆော့ဝဲလည်း အဆင်သင့်ရှိမထားဘူးဆိုရင် ဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီး အဆင်ပြေအောင် လုပ်လို့ရပါတယ် .. ဒီနည်းလေးက Window 7, Vista နဲ့ Window 8 မှာတော့ အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ် .. Window XP မှာတော့ ရမရ မစမ်းရသေးပါဘူး .. ကဲ .. စလိုက်ကြစို့
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ခွေ Burn ဖို့အတွက် Nero Micro 12.0.02900 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Portable မဟုတ်ပဲ Micro ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်... Nero BurningROM , Nero Express ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးခြယ် install လုပ်နိုင်သည့်အပြင် နှစ်မျိုးစလုံးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် serial key ပါဝင်ပြီး ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးသားမို့ စိတ်ချလက်ချ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... Install လုပ်မယ်ဆိုရင် Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Windows ရဲ့ error တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ Windows Repair 1.9.1 Portable လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူးလို့ သုံးဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... Windows ထဲမှာရှိနေတဲ့ registry errors and file permissions အစရှိတဲ့ repair ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အမျိုးပေါင်း ( ၂၁ ) မျိုး ပါဝင်ပါတယ်.... Windows Updates လုပ်မရဘဲ error တက်နေတာတွေကိုလည်း ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် Dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
CCleaner Professional + Business Edition 3.25.1872 ( Install လုပ်ပုံပါထည့်ပေးထားပါတယ်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးသိပြီသားဖြစ်တဲ့ CCleaner Professional + Business Edition 3.25.1872 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Business Edition နှင့် Professional ကြိုက်နှစ်သက်ရာသုံးနိုင်ပါတယ်.... တစ်ချို့ဘော်ဒါတွေ အခုမှစသုံးကြတော့ Install လုပ်ပြီး လိုင်စင်ထည့်တာ အဆင်မပြေကြလို့ Install လုပ်ပုံလေးကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack + serial ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Angry Birds ချစ်သူများအတွက် Angry Birds Seasons 3.0.0 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီဂိမ်းလေးကို အပြည့်ဝ ကစားနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်အသုံပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်... Patch ခြိုးပြီးသွားလျှင် Notepad ထဲမှာ Register လုပ်ဖို့အတွက် key ထည့်ပေးထားပြီး software နှင့် Patch ဖိုင်ကို လင့်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အပျော်တန်း ဗီဒီယို edit လုပ်လို့ရတဲ့ Wondershare Video Editor 3.1.0.4 Final ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအသုံးပြုလို့ရပြီး အပျော်တန်းအဆင့်ဆိုပေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ စုံလင်အောင်ပါဝင်ပါတယ်.... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်ပါဝင်ပြီး Mediafrie မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... Laptop တွေမှာ Battery သက်တန်း ကြာရှည်ခံဖို့အတွက် Laptop Battery Master 2013 + Portable ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Laptop တွေမှာ သူ့ software နဲ့သူပါပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် စမ်းသုံးချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ... အချို့ Laptop တွေမှာ Battery သက်တန်း ကြာရှည်ခံဖို့အတွက် တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်ခန့် အားကုန်တဲ့ အထိသုံးပေးပြီး အားပြည့်တဲ့အထိ ပြန်အားသွင်းပါလို့ ရေးသားထားတာဖတ်ဖူးကြမှာပါ... Battery ရဲ့ ဆဲလ်တွေ အကုန်အလုပ်လုပ်အောင် အားကုန်တဲ့အထိသုံးပေးရပါတယ် အားအပြည့်ပြန်သွင်းပေးရပါတယ် ဒါမှ Battery သက်တန်းကြာရှည်ခံမှာပါ... အချို့က နားမလည်တော့ အားကုန်တဲ့အထိမသုံးကြပါဘူး ... အဲ့ဒါဆို အဲ့အပိုင်းမှာ Battery ရဲ့ ဆဲလ်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သေကုန်ပါလိမ့်မယ်... အဲ့ဒီအခါ Battery အား ကြာကြာသုံးမရတာတို့ ပျက်တာတို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်... အခု Laptop Battery Master 2013 + Portable ကိုအသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် Windows XP & Windows7တင်နည်း (မြန်မာလို) စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကို အရင်ကလည်း တင်ပေးပြီးသားပါ... လင့်တွေအလုပ်မလုပ်တော့လို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ဖတ်နိုင်အောင်လည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်... စာအုပ်တော်တော်များများကို www.pyaybloggerebook.minus.com မှာတင်ပြီးသားပါ... လိုအပ်ပါက ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်... အခုဒီစာအုပ်ကို လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Avast! အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Avast! Internet Security v7.0.1474.765 + Key လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ထုံးစံအတိုင်း software + key နှင့် key ဖိုင်ကို လင့်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်... Dropbox မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... ဓါတ်ပုံတွေကို အလွယ်တကူ မျက်နှာဖြတ်ဆက်လုပ်လို့ရတဲ့ Face Off Max v3.4.8.6 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသုံးပြုပုံ နမူနာပုံလေးတွေလည်း အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားလို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack နှင့် Keygen ပါဝင်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် dropbox နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို convert လုပ်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Total Video Converter HD 3.71.100812 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးလို့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... ဒီကောင်လေးကို Install လုပ်လိုက်ရင် Total Video Player လေးပါ တင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်... အသုံးပြုပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ Conveter တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အတူတူပါပဲ... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Serial key ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire နှင့် Sharebest နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Kaspar Key လေးတွေ အသစ်လေးတွေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကီးထည့်ပုံကိုလည်း အောက်မှာပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... Kasparsky Internet Security 2012 (76.42MB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire download Minus download အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူနိုင်ပါတယ် ... Kaspersky Internet Security 2013 v13.0.0.3370 + key + activation (142.6 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Anti-Virus 2013 + key + activation (134 Mb) အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Kaspersky Key ထည့်နည်း ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... kasparsky offline update လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ Update ဖိုင်များကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်... kasparsky ofline update လုပ်နည်း (မြန်မာ) 1.0 MB ကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... ယခု Kaspersky Keys for All Product Kaspersky ကို Mediafire နှင့် sharebeast နှစ်နေရာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂေါ်မစွံလူပျိုကြီးဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းထားတဲ့ My Kingdom For The Princess ဂိမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီဂိမ်းလေးက 1,2,3 သုံးမျိုးရှိပါတယ် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ software က တင်လိုက်တာနဲ့ သုံးမျိုးစလုံးကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကစားနိုင်ပါတယ်... ကျွန်တော် www.dropbox.com မှာ ပြောင်းတင်ပေးထားပါတယ်... အခုရက်ပိုင်း mediafire ကလင့်တွေ အပိတ်ခံနေရလို့ အဆင်ပြေအောင် ပြောင်းတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000 1.70.0.1100 Full
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Malware တွေကို အကောင်းဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Malwarebytes Anti-Malware ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်ခုပြောပြချင်တာက Antivirus တစ်မျိုးမျိုးတင်ထားရင် လုံလောက်တယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူးခင်ဗျာ... ယခုကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာ Kaspersky Internet Security 2013 တင်ထားပါတယ် SUPERAntiSpyware တင်ထားပါတယ်... အခုထပ်ပြီး Malwarebytes Anti-Malware တင်လိုက်ပါတယ်... သိစေချင်တာက သုံးမျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာကိုပါ... FB မှာလည်းသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မေးထားပါတယ်... Antivirus နဲ့ AntiSpyware နှစ်မျိုးစလုံးတင်သုံးလို့ရလားတဲ့... တင်သုံလို့ရယုံတင်မဟုတ်ပါဘူး တင်သုံးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေဆိုတာ ဆိုက်ပေါင်းစုံ ၀င်ကြတာများပါတယ်... FB မှာလည်းလင့်တွေက အမျိုးမျိုးစုံရှယ်နေကြတာပါ... အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Malwarebytes Anti-Malware လေးကိုသုံးကြည့်ပေးပါ Pro ဖြစ်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပါတယ်.... မိမိစက်မှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ Malware တွေနဲ့ တစ်ချို့ဆိုက်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Malware တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်... Malware ရှိနေတဲ့ဆိုက်တွေကို ၀င်မိရင်ရှိကြောင်းကို ညာဘက်အာက်ခြေနားမှာ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်... ဒီကောင်လေး တင်ပြီးသွားရင်လည်း Update ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးပါ... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ... အရင်တင်ထားပြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ software လေး Run ပေးလိုပ်ယုံနဲ့ Pro ဖြစ်သွားမှာပါ...
CyberLink PowerDirector 11 Ultra v 11.0.0.2215 (preactivated )
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Video Editing သမားတွေနှင့် create home videos ပြုလုပ်လိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ CyberLink PowerDirector 11 Ultra v 11.0.0.2215 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ.... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... Install လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူတဲ့အပြင် ဒေါင်းလော့ဖိုင်ထဲက Notepad ထဲမှာလည်း Install လုပ်နည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်... အမြဲတန်းအသုံးပြုနိုင်အောင် Patch ဖိုင်ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire, extabit နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Read more...7comment
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... ၀င်းဒိုး Update လုပ်လိုက်လို့ Activate မဖြစ်တော့တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် Windows7Loader,Activator v2.3.1 လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... IDM 6.12 Build 26 Final Update လေးရလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 26 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ........ Maxthon 3.5.2.600 ကို Mediaifre မှာတင်ပေးထားပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
Maxthon မှာ မြန်မာလိုပေါ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် Menu >> option >> webpage font မှာ Zawgyi one ပြောင်းပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ... Home Page ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Google Chrome 23.0.1271.64 ကို Mediafire မှာ တင်ပေးထားပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Mozilla FireFox 17 ကို Mediafire မှာတင်ပေးထားပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...
CyberLink AudioDirector Ultra 3.0.2030 (preactivated )
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... အသံတည်းဖြတ်တဲ့ Software တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ CyberLink AudioDirector Ultra 3.0.2030 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသံပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် EQ ချိန်ညှိတာတို့ အသံဖြတ်တောက်တာတို့ စသည်ဖြင့် Function စုံစုံလင်လင်ပါဝင်ပါတယ်... လိုင်စင်မလိုပါဘူး Install လုပ်အသုံးပြုယုံပါပဲ... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... ဆရာ မျိုးသူရ ရေးသားထားတဲ့ လွယ်ကူလေ့လာ အခြေခံကွန်ပျူတာ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို တောင်းထားတဲ့ ဆရာတော်တပါးရှိလို့ အခြားလေ့လာလိုတဲ့ ဘော်ဒါများလည်း အသုံးပြုနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... PC Basic, Window Vista, Word 2007, Excel 2007, Photoshop CS3, Nero 8 အသုံးပြုပုံတို့ကို အခြေခံကမှစ အသေးစိပ်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Toy Story2ဂိမ်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Install လုပ်ပြီး ဘာမှထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူး တန်းကစားယုံပါဘဲ... ထုံးစံအတိုင်း Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများရှိရင် ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... WinRAR 4.20 Final (x86x64) Update လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... WinRAR ကတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ Cbox မှာ တောင်းထားတဲ့ ဘော်ဒါအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်.... 32/ 64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တင်ပေးထားပြီး RAR ဖိုင်အနေနဲ့ 32/64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်တင်ပေးထားသလို 32, 64, keygen သုံးမျိုးကို လင့်ခွဲပြီး exe အနေနဲ့တင်ပေးထားပါတယ်... တစ်ချို့ RAR ဆော့ဝဲလ်မရှိလို့ ဒေါင်းတာကို RAR နဲ့တင်ထားလို့ အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုး ရှိမှာဆိုးလို့ exe ပါတင်ပေးထားပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပြီး Meaiafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Read more...2comment
Need for Speed Underground ( Install လုပ်ပုံပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Need for Speed Underground ဂိမ်းလေးကို ကျွန်တော့် Blog မိတ်ဆွေများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဖိုင်ဆိုက် 160 MB ရှိတာမို့ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ... ( Install လုပ်ပုံပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်...)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အကိုတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း လိုအပ်ရင် အသုံးပြုနိုင်အောင် SPB SHELL 3D ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဒီဇိုင်းလည်းလန်းပါတယ် ထွက်တာလည်း ကြာပြီဖြစ်လို့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ... အချို့ဆိုက်တွေမှာ ဒေါင်းလော့လင့် အလုပ်မလုပ်တော့လို့ တင်ပေးပါဆိုတာနဲ့ Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ် ... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... How to open an itune account ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို Facebook ပေါ်ကတွေ့လို့ ဒေါင်းယူသိမ်းထားတာလေးပါ... မူရင်းရေးသားသူကတော့ speaknut@gmail.com လို့ဖော်ပြထားပါတယ်... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးထားလို့ သတိရတာနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပြူတာ Hang ခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် Process Lasso Pro 6.0.1.88 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတ်... ဒီ Process Lasso လေးက ကွန်ပျူတာရဲ့ CPU Speed ကိုမြန်ဆန်အောင် CPU ကို စွမ်းရည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကွန်ပျူတာ Hang ခြင်း၊ Not Responding ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်... ဒါအပြင် မလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ CPU အလုပ်လုပ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် CPU ကိုသက်သာစေပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Keygen နှင့် Patch နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်....... 32/64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် လင့်ခွဲထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွန် ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေး ရလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... myanmarplay.com မှာတင်ထားတာလေးကို ဒေါင်းယူပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ... ဒီစာအုပ်ကလေးကို လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire နှင့် Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Angry Birds ချစ်သူများအတွက် Angry Birds Star Wars HD v1.0 လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ထွက်တာတော့ ကြာပါပြီ ကျွန်တော် အလုပ်မအားတဲ့ ရက်က ထွက်တာဆိုတော့ မတင်ပေးဖြစ်တာပါ... အကိုတစ်ယောက်က တောင်းထားတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ... အပေါ်က ဘားမှာဖော်ပြထားတဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုက်တွေမှာလည်း တင်ကြပါတယ် ကျွန်တော်ထက်လည်း ပိုတော် ပိုစုံပါတယ် ... Angry Birds Star Wars HD v1.0 for Android ကို Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Angry Birds ချစ်သူများအတွက် Angry Birds Star Wars v1.0 လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ထွက်တာတော့ ကြာပါပြီ ကျွန်တော် အလုပ်မအားတဲ့ ရက်ကထွက်တာဆိုတော့ မတင်ပေးဖြစ်တာပါ... အကိုတစ်ယောက်က တောင်းထားတာနဲ့ တင်ပေးလိုက်တာပါ... အပေါ်က ဘားမှာဖော်ပြထားတဲ့ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုက်တွေမှာလည်း တင်ကြပါတယ် ကျွန်တော်ထက်လည်း ပိုတော် ပိုစုံပါတယ် ... Angry Birds Star Wars v1.0 for PC ကို Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
IP-MAC ကိုချိတ်ထားတဲ့နက်ဝပ်ထဲက လွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေပေးမဲ့ ဆေ့ာဝဲလ်လေးပါ mac filter ကို ယူသုံးချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ။အပြည့်အစုံကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... DJ ၀ါသနာရှင် သူငယ်ချင်းများအတွက် Atomix Virtual DJ Pro 7.2 Build 422 Full ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... Key, Crack, Patch ဖိုင်ထည့်ပေးဖို့မလိုပါဘူး ဒေါင်းလော့ကရလာတဲ့ Virtual DJ Pro 7.3 Build 422 Port ဆိုတဲ့ Folder အတိုင်းကို C အောက်မှာထည့်ပြီး double click နှိပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ငယ်ငယ်က အရမ်းဆော့ခဲ့ကြတဲ့ Mortal Kombat5Portable လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Portable ဆိုတော့ အင်စတောလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး ဒေါင်းလော့ကရလာတဲ့ Mortal Kombat5Portable ဖိုင်လေးကို C အောက်မှာထည့်ပြီး ကစားယုံပါပဲ... Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
Read more...3comment
Skype 6.0.0.126 Offline Installer နှင့် အသုံးပြုနည်း စာအုပ်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Skype 6.0.0.126 Offline Installer လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Skype အသုံးပြုနည်း မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် စုကြည်ထွေး ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Skype အသုံးပြုနည်း စာအုပ် အခန်းပေါင်း (၃၁) ခန်းပါဝင်ပြီး ၁။ မိတ်ဆက် ၂။ Skype ၏သမိုင်းကြောင်း ၃။ Skype ဆော့ဝဲလ်ကို အင်တာနက်မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်း ၄။ Skype ဆော့ဝဲလ်ကို Install ပြုလုပ်နည်း ၅။ Skype အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း ၆။ Skype တွင် ပိုက်ဆံထည့်နည်း ၇။ Skype Profile ပြင်ဆင်ခြင်း ၈။ Skype Account ၏ Password ပြောင်းခြင်း ၉။ Skype တွင်ဘာသာစကားပြောင်းပြီး အသုံးပြုခြင်း ၁၀။ Skype အသုံးပြုရာတွင် သိထားသင့်သည့် နေရာများ ၁၁။ Testing Call နှင့် ဖုန်းစမ်းသပ်ခေါ်ဆိုခြင်း ၁၂၊ နိုင်ငံခြားဖုန်းနံပါတ်များကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ပြီး စကားပြောခြင်း ၁၃။ ခေါ်ပြီးသားဖုန်း နံပါတ်များကို ပြန်ခေါ်ခြင်း ၁၄။ Phone Number ကို Contact List တွင်ပေါင်းထည့်ခြင်း ၁၅။ Contact Lists တွင် သူငယ်ချင်းများ ပေါင်းထည့်ခြင်း ၁၆။ Contact Lists တွင်ရှိသော သူများနှင့် စကားပြောခြင်း ၁၇။ Facebook (or) Mail မှ သူငယ်ချင်းများ ပေါင်းထည့်ခြင်း ၁၈။ ရုပ်ပါမြင်အောင် Video Call နှင့် အသုံးပြုခြင်း ၁၉။ Group ဖွဲ့ပြီး Video Call အသုံးပြုခြင်း ၂၀။ Group ဖွဲ့ပြီး Conference Call အသုံးပြုနည်း ၂၁။ SMS & Instant Messages ပေးပို့ခြင်း ၂၂။ privacy Setting ကို Control လုပ်ခြင်း ၂၃။ History ကို Mange လုပ်ခြင်း ၂၄။ Contact List မှ သူကို Block လုပ်ခြင်း ၂၅။ Block လုပ်ထားသူအား Unblock ပြန်လုပ်ခြင်း ၂၆။ Screen ကို Share လုပ်ခြင်း ၂၇။ Connestion Setting ချိန်ညှိခြင်း ၂၈။ Phone Call အတွက် အသံ Voice Setting ချိန်ညှိခြင်း ၂၉။ Video Call အတွက် ရုပ် Video Setting ချိန်ညှိခြင်း ၃၀။ Skype ကို Protable လုပ် အသုံးပြုခြင်း ၃၁။ Skype အသုံးပြုဖို့အတွက် Hardware လိုအပ်ချက် စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံအောင် ရေးသားဖော်ပြထားထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Skype 6.0.0.126 Offline Installer ကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဒိုင်ယာရီ ရေးမှတ်ဖို့အတွက် Advanced Diary 3.6 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... မြန်မာလိုတင်မက ဓါတ်ပုံများပါ ထည့်သွင်းမှတ်သားနိုင်လို့ ဒိုင်ယာရီ ရေးလေ့ရေးထရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်.... အောက်မှာလည်း နမူနာပုံလေးတွေ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသလို အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်နှင့် Serial Key ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာ တင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...........
မြန်မာနိုင်ငံမှ virus များကို ကွန်ပျူသို့ မ၀င်အောင်ပိတ်ကြမယ်
ဒီနည်းလေးကတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် က anti virus software တွေ သုံးတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူးပြောလို့ မသုံးပဲ virus တွေ ပိတ်ထားတဲ့နည်းလေး တင်ပေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော် ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ လုပ်နည်းလေးကတော့ ကြာပါပြီ။ မသိသေးသော pyayblogger သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက်ပါ။
ပထမဆုံး run box မှာ gpedit.msc လို့ရိုက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် User Configuration အောက်က Administrative Templates အောက်က System ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အောက်က Don't run specified Windows applications ကိုနှိပ်လိုက်လျှင် ဘေးမှာ အကွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ policy setting ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ။ အောက်ကလိုပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Browser တခုထဲကနေ Facebook အကောင့် ၂ခု ၃ခု , Gmail အကောင့် ၂ခု ၃ခု ကို တပြိုင်ထဲ သုံးနည်း
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် ရဲ့ ပို့လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....
အရင်ကတော့ Browser နှစ်မျိုး သုံးမျိုး ထားသုံးကြတာပါ... ခုနည်းလေးကတော့ တကယ်မိုက်ပါတယ်...
Browser တခုထဲကနေ Facebook အကောင့် ၂ခု ၃ခု , Gmail အကောင့် ၂ခု ၃ခု ကို တပြိုင်ထဲ သုံးချင်လို့ပါဆိုပြီး မေးထားလို့ အားလုံး ဗဟုသုတရအောင် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
Chorme Browser နဲ့ Firefox Browser မှာ မိမိတို့ ရှိသမျှ Facebook,Gmail,twitter စ,တဲ့အကောင့်တွေကို တပြိုင်ထဲ Login ဝင်လို့ရနိုင်ပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... မိမိကွန်ပျူတာပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Screen Recorder လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ZD Soft Screen Recorder v5.0 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... သုံးရတာလွယ်ကူပြီး Function တွေပါစုံလို့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို Click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်ပါဝင်ပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ......
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ........ Windows Skin သုံးတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် Glass Skin Pack 1.0 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပုံမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ အောက်မှာလည်း နမူနာပုံထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ် ဒီဇိုင်းတော့လန်းတယ် ကြိုက်နှစ်သက်လို့အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် 32 / 64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် လင့်ခွဲပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.........
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... စွန့်စား စဉ်းစား ကစားရပြီး ကျွန်တော့်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Indiana Jones And The Infernal Machine လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ဒီဂိမ်းလေးက ကစားနေရင်း ရောက်တဲ့နေရာမှာ save မှတ်ကစားနိုင်ပါတယ်... ကစားဖို့အတွက် ဒေါင်းလော့မှရလာသော RAR ဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်ရင် Indiana_Jones_and_the_Infernal_Machine ဆိုတဲ့ 74.4 MB ရှိတဲ့ ဖိုင်လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်.... အဲ့ဖိုင်လေးကို ဖြည်ရင် Local Disk C အောက်ကိုရွေးပေးပါ... ဖြည်လိုက်ရင် 667 MB ရှိတဲ့ INDY5 ဆိုတဲ့ဖိုင်လေး ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်... အဲ့ဖိုင်လေးထဲက Jones3D အိုင်ကွန်လေးကို Desktop ပေါ်မှာ shortcut ထုပ်ပြီး ကစားနိုင်ပါပြီ... အပြင်းပြေကစားလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ.......
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... ကျွန်တော့် Blog လေးကိုလာလည်ကြတဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အပြင်းပြေ ဂေါက်ရိုက်နိုင်ရန် Total Pro Golf3လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... နမူနာပုံလေးတွေကို အောင်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ......
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... IDM 6.12 Build 25 Update လေးရလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Build 25 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကွန်ပျူတာ လေးလန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် SpeedUp My PC 2013 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း တင်ပေးဖူးတာမို့ သိထားပြီးသား ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ... ဒီကောင်လေးကို အသုံးပြုဖို့အတွက် .Net Framework 3.5 နှင့်အထက် တင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်... မတင်ထားရသေးလျှင် ဒီမှာ ဒေါင်းပြီး install လုပ်နိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ်... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... CD/DVD ခွေပေါ်မှာ မိမိစိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းဆွဲ စာတန်းထိုးလို့ရတဲ့ RonyaSoft CD DVD Label Maker လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ အလွယ်တကူ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး Print ထုပ်နိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပြီး Mediafire မှာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....